စည်ကားလွန်းလှတဲ့ ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ | Duwun
ဒါရိုုက်တာ ဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုတို့ရဲ့ မင်္ဂလာညစာစားပွဲက အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေ အပြင်က မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ စည်ကားလွန်းလှပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသုတို့ရဲ့ မင်္ဂလာညစာစားပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ(၁) ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းလျားလိတ်ဟိုတယ်မှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ မင်္ဂလာညစာစားပွဲကို အနုပညာလောကသားထဲက ညီအစ်ကို မောင်နှမ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေက အားပေးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ မင်္ဂလာညစာစားပွဲမှာ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ ဟန်ထူးလွင်၊ ဝေလ၊ အာဇာနည်တို့က သတို့သားအရံ အဖြစ် ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့ကြပြီး ဝေလရဲ့ ဇနီး၊ ဝမ်း၊ ဟန်ထူးလွင်ရဲ့ဇနီး၊မိုးစက်ဝိုင်တို့က သတို့သမီး အရံအဖြစ် အားဖြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဟာ ချစ်သူသက်တမ်း (၅)နှစ်ပြည့်မှာ လက်ထပ်လိုက်ကြတာပါ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကြင်ကြင်နာနာ ယုယုယယရှိလှတာကြောင့် သူတို့စုံတွဲလေးဟာ အားလုံး အားကျရတဲ့ စုံတွဲ တစ်တွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဟာ မင်္ဂလာဦးအလှူကို ဇန်နဝါရီ(၁) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာပဲ ရန်ကုန်မြို့ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မင်္ဂလာဦးအလှူမှာ သရုပ်ဆောင်ကိုလူချောအဖွဲ့ (၈၂)ဦး၊ စက်မှုအခြေခံသာရေး၊နားရေးအဖွဲ့ဝင်(၁၈၀)ဦးတို့အတွက် တစ်ဦးလျှင် ဆန်(၁)တင်းခွဲ၊ ဆီ (၃) ပိဿာဆီ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၂၆၂)ဦးအတွက် လှူဒါန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်သစ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးတို့ရဲ့ မင်္ဂလာဦးအလှူလေးဟာ မြင်ရတာ အရမ်းကို ကြည်နူးလွန်းလှပါတယ်။ အနုပညာသမားအချင်းချင်းဖေမကူညီလှူဒါန်းမှုကြောင့် အဖွဲ့သားတွေ အားလုံး ပျော်ရွှင်နေရပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းမှာ စေ့စပ်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုက ဒါရိုက်တာ ဏကြီးကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပိုင်ဖြိုးသုက ပြောပြထားပါသေးတယ်.
'' သူ့ကို အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကံကို အပြည့်အဝမယုံကြည်ဘူး။ အဲ့ဒါကတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုလေး အပြည့်အဝ တည်ဆောက်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ သု တို့ တွဲတာလည်း ကြာပြီ အခုဆို ၅ နှစ်ပြည့်တော့မှာပါ။ အနုပညာအလုပ်တွေလည်း စတွဲလုပ်နေပြီ။ ပရိသတ်အရှေ့မှာ အမြင်တင့်တယ်အောင် စေ့စပ်ထားလိုက်တဲ့ သဘောပါ'' လို့ ဆိုပါတယ်.
ဒါရိုက်တာ ဏကြီးနဲ့ ဇွန်လအတွင်းက စေ့စပ်ခဲ့တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုဟာ ဆေးကျောင်းတက်ရင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင်ဘက်ကို ကြိုးစားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ အတွင်းမှာတော့ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်. အနုပညာပျိုးခင်ကစင်တင်ပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီးလေး ပိုင်ဖြိုးသုက အခုဆိုရင် 3Girl ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနဲ့ အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်တာမလေး ပိုင်ဖြိုးသုက ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ မှာ ရန်ကုန်တိုင်း ကျန်းမာရေးသံတမန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်.